Obama oo ka hadlay isbadalada iyo Banaabaxyada ka socda dalalka carabta – SBC
Obama oo ka hadlay isbadalada iyo Banaabaxyada ka socda dalalka carabta
Madaxweynaha Maraykanka Brack Obama ayaa jeediyay Kalmadiisii ku aadanayd wadamada Islaamka iyo kuwa carabta,iyadoona uu si aad ah uga hadlay isbadalada siyaasadeed iyo banaabaxyada isbadal doonka ah ee haatan ka socda qaar kamid ah wadamada Bariga dhexe iyo Waqooyiga Afrika.
Obama oo khudabadiisu ahayd mid khusaysa Kacdoonada dalalka carabta kajira ayaa isaga oo ka horhadlaya dhismaha Wasaarada arimaha dibada Maraykanka waxaa uu sheegay in danta Maraykanku ay ku jirto isbadal kasta oo ku dhisan Dimuqraadiyad oo laga hirgaliyo wadamada Bariga dhexe iyo kuwa kale ee carabta.
Obama waxaa uu soo hadal qaaday isbadaladii ka dhacay Masar iyo Tunis,iyadoona sida uu sheegay ay isbadaladaasi ka yimaadeen shacabka dalalkaasi oo Iyagu gartay Masiirkooda,iskana horleexiyay dad yar oo awood ku maquuninayay.
“Anagu waxaan taageeraynaa isbadal ku dhisan Dimuqraadiyad,mana ogolin in shacabka la cadaadiyo,una dul qaadan mayno dhibaatooyinka lagu hayo dadka samaynaya banaabaxyada isbadaldoonka ah”waxaa hadalkaasi Yiri Madaxweynaha Maraykanka Barck Obama xili uu jeedinayay khudbadiisii ku aadanayd kacdoonada isbadal doonka ah ee dalalka carabta ka socda.
Obama waxaa uu kaloo sheegay in xiliyada soosocda Maraykanku ay qaadi doonaan talaabo kasta oo ay ku taageerayaan banaabaxayaasha isbadal doonka ah ee wadamada carabta.